Amin’ny Volavolan-dalàna Mifehy Ny Heloka Antserasera Ao Brezila, Lasa Miasa Ho ‘Andrimasom-Pokonolona’ Ny Media Sosialy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Avrily 2016 5:10 GMT
Nisarika ny sain'ny iraisampirenena teo amin'ny sehatry ny zo nomerika i Brezila taorian'ny fankatoavana ny Marco Civil, ‘ fanambaràn'ny zon'olombelona’ ho an'ny aterineto izay miaro mazava tsara ny zo haneho hevitra malalaka amin'ny aterineto sy miantoka ny tsy fitongilanan'ny tambajotra sy ny fiarovana lahatahiry. Novolavolain'ireo manampahaizana momba ny lalànan'ny teknolojia tamin'ny alalan'ny dingana fakan-kevitra misokatra miaraka amin'ny fiarahamonim-pirenena ny volavolan-dalàna, fomba fanao vaovao ao Brezila sy maneran-tany. Na dia lany tamin'ny taona 2014 aza, izay hitan'ny maro fa anisan'ny valinteny ara-politika tamin'ny ampamoakan'i Snowden, niaritra fikasana fanovana betsaka izany nanomboka teo. Ity no lehibe indrindra hatramin'izao.
Manome tolo-kevi-panitsiana ny Marco Civil ny tatitra izay mitaky ny tranonkala sy ny tambajotra sosialy mba hanaisotra votoaty manala-baraka – izany hoe votoaty hita fa “manimba ny voninahitry ny tena manokana” – ao anatin'ny 48 ora nandraisana ny fampahafantarana avy amin'ny mpitory na ny olona niharan'ny votoaty voalaza. Mety hiatrika heloka tsotra na heloka bevava amin'ny tranga sasany koa ny tranonkala raha tsy mahavita mandray andraikitra mamaly ny fangatahana. Milaza ihany koa ny fanitsiana fa tsy maintsy manaramaso ny zavatra ataon'ny mpiserasera ny tranonkala sy ny tambajotra sosialy mba hisorohana ny votoaty tahaka izany tsy hipoitra indray manerana ny aterineto, maro loatra saingy asa sarotra tanterahana.
Manamarika fisintahana amin'ireo lalàna maro momba ny fanalam-baraka ao Amerika Atsimo ihany koa ity fanitsiana manokana ity, ka manolotra fiarovana mitovy tantana ho an'ny olo-tsotra sy ny olo-panjakana ihany manoloana ny fanalam-baraka. Nilaza ny fanambarana niarahana natao nosoniavin'ireo fikambanana Breziliana sy iraisampirenena 50 mpiaro ny zo nomerika fa hiteraka “fiantraikany masiatsiaka” amin'ny fahalalahana maneho hevitra ny fanovana tahaka izany:
Hoy ny voalazan'ny fanangonan-tsonia navoakan'ny Ivontoerana ho an'ny Teknolojia sy ny Fiarahamonina Rio, vondrona mpiaro ny zo nomerika, izay efa nahangona sonia maherin'ny 10.000 hatramin'izao:
Mpikaroka Sergio Amadeu Oliveira nilaza hoe: